FIFAMPIKASIHAN-TANANA :: Zandary namoy ny ainy nanasaraka ady • AoRaha
FIFAMPIKASIHAN-TANANA Zandary namoy ny ainy nanasaraka ady
Niafara tamin’ny famoizana aina ny fifampikasihan-tanana teo amin’ny lehilahy roa tany Bemavo-Beroroha, tamin’ny 2 novambra lasa teo. Nanasaraka azy roa lahy niady ireo ny zandary iray no niantefan’ny fitaovam-piadiana teny amin’ireo niady, ka namoy ny ainy. Maty taorian’izay ny iray tamin’ireo nifampikasi-tanana.
“Mba tsy hisian’ny mety ho fikorontanana dia niditra an-tsehatra hanasaraka azy roa lahy ny zandary iray nahita azy ireo niady. Samy tsy nisy nanaiky nosarahan’ilay zandary izy roa lahy niady ireo. Tezitra izy ireo rehefa niditra an-tsehatra io zandary io, ka avy hatrany dia samy nampiasan’izy ireo ny fitaovam-piadiana teny aminy.
Vokany, tsy tana ny ain’i Xavier Rakotomalala, zandary mpiana-draharaha miasa ao amin’ny tobim-paritry ny Zandary Fotadrevo”, hoy ny loharanom-baovao avy any amin’ny zandarimaria any an-toerana.
Nahita io ireo zandary miasa ao amin’ny zana-tobim-paritra Bemavo dia niditra an-tsehatra nifehy ny zava-nisy. Minitra maromaro no niditra an-tsehatra ireo zandary vao voafehy ny adin’ireo roa lahy. Minitra vitsy taorian’izay dia namoy ny ainy ny iray. Tafatsoaka ary mbola karohina hatramin’ny omaly ilay faharoa, araka ny fantatra avy any an-toerana.
FAHAFATESANA NIFANJOHY :: Mpivady niara-maty teny amin’ny hopitaly
TAHOTRA FITSARAM-BAHOAKA :: Nitolo-batana ny lehilahy iray nilaza ho namono ny rahalahiny